I-FAQs-iQuanzhou Tianli Co, Ltd.
Iwaranti yezixhobo zethu kunye nokwenza umsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwakho ziimveliso zethu. Kwwaranti okanye akunjalo, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi kulwaneliseko lomntu wonke
Ewe, sihlala sisebenzisa ukupakisha okuphezulu kumgangatho. Sikwasebenzisa ukupakisha ingozi enobungozi kwiimpahla eziyingozi kunye nokuhambisa okubandayo okukhuselekileyo kwezinto ezinobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zinokubangela intlawulo eyongezelelweyo.